The Gardener: အဟိံသ
Nonviolence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man. Destruction is not the law of the humans. Man lives freely by his readiness to die, if need be, at the hands of his brother, never by killing him. Every murder or other injury, no matter for what cause, committed or inflicted on another isacrime against humanity.
အကြမ်းမဖက်ခြင်းဟာ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေထဲမှာ အားအကောင်းဆုံး ခွန်အားဖြစ်တယ်။ အကြမ်းမဖက်ခြင်းဟာ လူသားတွေထွင်နိုင်သမျှထွင်ထားတဲ့ အစွမ်းအထက်ဆုံး အဖျက်လက်နက်တွေထက်ပိုပြီး အစွမ်းထက်တယ်။ ဖျက်စီးပစ်ခြင်းဟာ လူ့သဘာဝဥပဒေသမဟုတ်ဘူး။ လူတွေဟာ သေဖို့ အသင့်ဖြစ်နေခြင်းအားဖြင့် လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ကြတယ်။ တကယ်လို့လိုအပ်ရင် သူ့ညီအကို လက်ချက်နဲ့ပဲသေမယ်၊ သူ့ညီအကိုကို သတ်ပြီး မရှင်သန်ဘူး။ (သတ်ဖြတ်တဲ့သူကို ညီအကိုလို့ ခံယူထားတာပါ။) လူသတ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်ကို ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်စေခြင်းတွေဟာ ဘာအတွက်ပဲထိခိုက်ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်တယ်။
အဲဒါလေးဖတ်ပြီး ... တော်တော်လေးသဘောကျနေတယ်။ ....
ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ ဂန္ဒီကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံတယ်။
သူပြောတာတစ်ခုရှိသေးတယ် ...။ လွတ်လပ်စွာ မရှင်သန်ရဘူးဆိုရင် သေသွားမှာ ဘာကြောက်စရာရှိလဲ ...တဲ့ ...။ သေသော်မှတည့် အော်ကောင်း၏ ...ဆိုတာကို သတိရပါတယ် ...။ ... ကိုယ့်အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်စေရဘူး။ ဒါပေမယ့် မှန်တာတွေကို ဆက်လုပ်ရဲရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အင်မတန့်အင်မတန် အားကျမိပါတယ်။ ...
ဂန္ဒီရဲ့ vision လေးကလည်းသဘောကျစရာပါ။ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖြေရှင်းနေရတာက ယာယီ နည်းလမ်းတွေလို့သူကလက်ခံတယ်။ သူပြောတာက ကလေးတွေကို ချစ်ခင်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအကြောင်း သင်ပေးဖို့ကသာ အန္တိမနည်းလမ်း ဖြစ်တယ်တဲ့...။ ကလေးတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးကိုနားလည်သွားရင် ... နောက်အနာဂတ်အတွက် စိတ်ချရပြီလို့ သူကယူဆပါတယ်။ သူ့အတွေးအခေါ်ကို သဘောကျပါတယ် ....။ ဒါဟာ အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့ လူကြီးသူမတစ်ယောက်ရဲ့ ကရုဏာနဲ့ယှဉ်တဲ့အမြင်ကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဒဿနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
... ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ နေထိုင်ချင်ပါတယ် ....။
လူအချင်းချင်း ခေါင်းပုံဖြတ် ညှင်းပမ်းမှု ... အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ကိုယ်မှန်တယ်လို့ သေချာသိနေတဲ့ အရာအတွက် .... အေးအေးဆေးဆေး ရပ်တည်ချက်မြဲမြံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ .... ဂန္ဒီဂျီက အကောင်းဆုံး သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ် .....။
လူကြီးလူကောင်းတွေ မရှိတော့ပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ အဆုံးအမဟာ ဆက်လက်တည်ရှိနေတာကို ကျေနပ်ပါတယ် ...။ သူတို့တွေရဲ့ ကရုဏာတရားဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ လေ့လာရမယ့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ....။
....လေးစားသင့်တဲ့သူကို လေးစားကြတာ မင်္ဂလာတစ်ပါး မဟုတ်ပါလားခင်မျာ ....။
The wisdom of Gandhi ကိုဖတ်နေရင်း သဘောကျမိတာလေးတစ်ခုရေးလိုက်ပါတယ်။
လက်နက်နဲ့ ရယူထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အယုံအကြည်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
စကားမစပ် နေမ၀င် အမ်ပိုင်ယာ(Empire)ကြီး နေ၀င်သွားတာ ကြာပါပေါ့လား ....။
နေ၀င်သင့်တာတွေ နေ၀င်သွားပါစေ ...။
နေ၀င်သင့်တာတွေ နေ၀င်သွားပါစေ ....။
နေ၀င်သင့်တာတွေ နေ၀င်သွားပါစေ .......။
I want freedom for the full expression of my personality. Mahatma Gandhi